Muxuu kusoo dhamaaday shirkii Golaha Wadatashiga Qaran ee maalintii afaraad? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu kusoo dhamaaday shirkii Golaha Wadatashiga Qaran ee maalintii afaraad?
Muxuu kusoo dhamaaday shirkii Golaha Wadatashiga Qaran ee maalintii afaraad?
Muqdisho (Caasimada Online) – Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran ayaa goordhow soo gaba-gaboobay maalintii afaraad, iyadoo aanay weli Madaxda is afgarad ka gaarin dooddihii u dhaxeeyay ee arrimaha Amniga iyo doorashada.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay in shirka uu gelinkii hore ee maanta uu qarka u fuulay in lagu kala tago, markii dooduhu adkaadeen.
Shirka ayaa maanta waxa uu galay marxaladii ugu adkeyd, ayada oo maalinta berri oo Jimce ah ay madaxdu fasax galayaan, waxaana habeen dambe la iskugu soo laaban doono kulan kale.
Madaxweyne goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed, Axmed Qoor-Qoor iyo Cabdicasiis Lafta-gareen oo ku xiran Farmaajo, ayaa la sheegay inay diidan yihiin in amniga dalka lagu wareejiyo ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Sida laga soo warinayo afhayeenada madaxda dowlad goboleedyada waxaa jira kulamo gooni-gooni ah oo caawa illaa berri ay yeelan doonaan madaxda, si la iskugu fahmo qoddobada muhiimka ah, si uu shirka u guuleysto.
Waxaa isa-soo tareysa cabsi ah in shirka uu burburi karo, ayada oo qodobka la xiriira amniga uu yahay caqabadda ugu adag ee haysata, maadama xulafada Farmaajo ay si adag uga soo horjeedan in lagu wareejiyo Ra’iisul Wasaare Rooble, kadib khilaaf xoogan oo ka dhex-qarxay madaxweynihii hore.